Lisitry ny blocker beta: Fampiasana, marika iraisana, ary fampahalalana momba ny fiarovana - Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina | Desambra 2021
Fiaraha-Monina Fahasalamana Mpanao Gazety Pets Lalao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Vaovao, Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fialam-Boly Fanabeazana Ara-Pahasalamana Ny Fizahana Fanatanjahan-Tena Mavesatra Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana
Tena >> Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina >> Inona no atao hoe blocker beta?
Inona no atao hoe blocker beta?
Fampahalalana momba ny zava-mahadomelina Beta blockers, toy ny metoprolol sy atenolol, dia fanafody prescript izay mampihena ny tosidra amin'ny alàlan'ny fanakanana ny vokatry ny adrenaline
Lisitry ny blocker beta | Inona ireo blockers beta? | Ahoana no fiasan'izy ireo | fampiasana | Karazana | Iza no afaka mandray blockers beta? | Fiarovana | Voka-dratsy | vola lany
Raha manana ianao tosidra ambony (hypertension), tsy irery ianao - misy vokany io toe-javatra mahazatra io efa ho antsasaky an'ny olon-dehibe any Etazonia. Raha tsy nampihena ny tosidranao ny fiovan'ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena, dia mety hanome fanafody ny tosidranao ny dokoteranao.
Beta blockers dia fanafody voatendry matetika izay mampihena ny tosidra. Matetika ny internista na mpitsabo aretin-tsaina (dokotera kardolojia) dia manome baiko ny blocker beta. Manohiza mamaky mba hahalalanao ny fomba fiasan'ny beta blockers, ny fomba itondrany ny toe-pahasalamanao, ary ny vokany azonao antenaina.
Lisitry ny blockers beta
Anaran'ny zava-mahadomelina Vidiny vola antonony Tahiry SingleCare Hamantatra bebe kokoa
Betapace sotalol 163 $ ho an'ny takelaka 60, 80 mg Makà tapakila sotalol Sotalol pitsopitsony
Bystolic (nebivolol) $ 265 ho an'ny takelaka 30, 10 mg Makà tapakila Bystolic Andininy bystolic
Coreg, Coreg CR (carvedilol) 162 $ ho an'ny takelaka 60, 6,25 mg Makà tapakila carvedilol Antsipiriany Carvedilol
Corgard (nadolol) $ 105 ho an'ny takelaka 30, 20 mg Makà tapakila nadolol Pitsopitsony Nadolol
Inderal, Inderal LA (propranolol) $ 83 ho an'ny takelaka 60, 20 mg Makà tapakila propranolol Antsipiriany Propranolol
Lopressor (metoprolol tartrate) $ 20 ho an'ny takelaka 60, 25 mg Makà tapakila tartrate metoprolol Metoprolol tartrate pitsopitsony
Normodyne, Trandate (labetalol) 52 $ ho an'ny takelaka 60, 100 mg Makà tapakila labetalol Antsipiriany Labetalol
Sectral (acebutolol) $ 31 ho an'ny kapsula 30, 200 mg Makà tapakila acebutolol Antsipiriany Acebutolol
Tenormin (atenolol) $ 100 ho an'ny takelaka 90, 50 mg Makà tapakila atenolol Antsipiriany Atenolol
Toprol XL (metoprolol succinate ER) 41 $ ho an'ny takelaka 30, 50 mg Mahazoa tapakila ER mandropaka metoprolol M etoprolol succinate ER tsipiriany
Visken (pindolol) $ 158 ho an'ny takelaka 30, 5 mg Makà tapakila pindolol Antsipirian'ny Pindolol
Zebeta (bisoprolol) $ 59 ho an'ny takelaka 30, 5 mg Makà tapakila bisoprolol Pitsopitsony Bisoprolol
Mpanakana beta hafa
Blocadren, Timoptic , Timoptic XE (timolol)
Inona ireo blockers beta?
Beta blockers dia kilasin'ny fanafody mitsabo ny tosidra, aretim-po , gadona fo tsy mahazatra, ary angina (fanaintainan'ny tratra). Indraindray izy ireo dia ampiasaina amin'ny marary izay voan'ny aretim-po, mba hisorohana ny aretim-po amin'ny ho avy, ary hanatsara ny fahavelomana. Ny beta blocker dia ankatoavin'ny FDA. Ireo beta blockers dia matetika hita amin'ny endrika tablette na kapila lava-famoahana eo no ho eo.
Ahoana ny fomba fiasan'ny beta blockers?
Ny bara blockers, na beta-adrenergic blocks agents, dia mifatotra amin'ny beta receptor, antsoina hoe beta-adrenoreceptors. Ny fanafody dia manakana ny norepinephrine sy ny epinefrine tsy hamatotra ireo mpandray. Amin'ny fanaovana izany, ny beta blocker dia manakana ny fanentanana ny fo ary mampihena ny tahan'ny fony, ny fihenan'ny fo (ny fahaizan'ny hozatra fo mihetsika), ary ny hafainganam-pandehan'ny conduction. Io koa dia mampihena ny fangatahana oxygen ary mampitombo ny fandeferana amin'ny fampiharana. Ny blocker beta dia azo ampiasaina irery na miaraka amina fanafody hafa, arakaraka ny famantarana sy ny tantaran'ny fitsaboana ny marary.
Ampiasaina inona ireo beta blockers?
Ny blocker beta dia afaka mitsabo fepetra isan-karazany, mifototra amin'ny famantarana manokana ny fanafody tsirairay, anisan'izany ny:
Aretim-po / aretim-po (aretin'ny lalan-drà)
Tosidra ( fiakaran'ny tosidrà )
Ny fitempon'ny fo (arrhythmia) tsy ara-dalàna toy ny AFib (fibrillation atrial)
Tachycardia (fitepon'ny fo haingana)
Ny tsy fahombiazan'ny fo
Fanaintainana tratra (angina)
fanahiana soritr'aretina ( hatsembohana, haingana ny tahan'ny fo, mangovitra )
Ny aortic dissection
Fampihorohoroana tena ilaina
Fisorohana ny migraine
areti-maso glaucome (amin'ny endrika mitete maso - ohatra dia misy ny timolol, carteolol, betaxolol)
Karazana blockers beta
Ny blocker beta dia tafiditra ao anaty vondrona maromaro:
Mpanakana beta tsy finday
Misy fiantraikany amin'ny mpandray beta-1 sy beta-2 izany. Ny blocker beta tsy finday dia tokony hampiasaina am-pitandremana (na tsy izany mihitsy) amin'ireo marary mifoka na manana olana amin'ny asma na havokavoka. Ohatra amin'izany ny propranolol, nadolol, timolol, ary pindolol.
Mpanakana beta Cardioselective
Ireo mpandray beta-1 ao am-po ihany no manakana ireo ary tsy misy fiantraikany amin'ny mpandray beta-2 ao amin'ny havokavoka na lalan-drà. Ka izy ireo dia azo antoka kokoa ho an'ny olona manana olana amin'ny havokavoka. Ohatra amin'izany ny atenolol, metoprolol,betaxolol, bisoprolol, acebutolol, ary nebivolol.
Ny beta blocker iray hafa dia antsoina hoe Brevibloc (esmolol). Ity beta blocker ity dia omena amin'ny tsindrona. Brevibloc dia ampiasaina hifehezana haingana ny tahan'ny ventricular amin'ny toe-javatra vonjy maika, ary koa ho an'ny fitsaboana vetivety amin'ny tachycardia (fitepon'ny fo haingana) sy ny fiakaran'ny tosidrà mandritra na aorian'ny fandidiana.
Blockers beta fahatelo
Ny sasany amin'ireo beta blockers dia misy hetsika hafa, toy ny fanakanana ireo receptor alpha, sy / na famokarana oksida azotazy hanampiana ireo lalan-dra hiala sasatra. Ohatra amin'izany ny labetalol, carvedilol, ary Bystolic.
Ary koa, misy ny blocker beta izay tsy ao anaty sokajy fa blockers beta ofisialy. Ohatra, ny ranomaso glaucoma dia misy ny beta blockers timolol (marika Timoptic, Timoptic XE), carteolol (Ocupress), ary betaxolol (Betoptic).
Iza no afaka mandray blockers beta?
Ny beta blocker dia azo omena ny ankizy sy ny olon-dehibe, raha toa ka tsy mihatra ny fampitandremana voalaza etsy ambany.
Amin'ny ankizy, ny fisafidianana zava-mahadomelina sy ny fatra dia miankina amin'ny taonan'ny zaza, ny toe-pahasalamany ary ny anton-javatra hafa.
Ny vehivavy bevohoka na miezaka ny bevohoka dia tokony manatona ny mpitsabo azy momba ny fampiasana beta blockers amin'ny fitondrana vohoka.
Betsaka ny olon-dehibe efa lehibe koa no mandray beta blockers. Matetika, ny dokotera dia hanomboka beta blocker amin'ny fatra ambany amin'ny olon-dehibe efa lehibe.
Mifandraika: Famantarana aretim-po
Milamina ve ireo mpanakan-doka?
Mpanakana beta tsy tokony hampiasaina raha manana ianaobradycardia henjana maharitra, tsindrona fo faharoa na diplaoman'ny fo fahatelo, tsy fahombiazan'ny fo, na fikorontanana kardônôgônia. Aza mampiasa beta blocker raha tsy mahazaka beta blockers ianao.
Araho ny tosi-dra sy fitepon'ny fony rehefa mandray beta blocker.
Raha voan'ny diabeta ianao, ny beta blockers dia mety hanakona soritr'aretin'ny siramamy ambany, toy ny fitepon'ny fony haingana. Mangataha torolalana amin'ny dokoteranao.
Lazao amin'ny dokotera raha misy aretina, indrindra raha mifoka ianao, na manana olana amin'ny havokavoka toy ny sohika na COPD. Lazao amin'ny dokotera koa raha manana olana amin'ny voa na aty ianao. Ampahafantaro ny dokoteranao ny momba ny fanafody rehetra raisinao, ao anatin'izany ny preskripsi, OTC, ary vitamina.
Ny Beta blockers dia mety hisy fiantraikany vetivety amin'ny haavon'ny kolesterola sy triglyceride. Ny dokoteranao dia hanara-maso ny tahan'ny kolesterolao.
Raha bevohoka ianao na mikasa ny hitoe-jaza, ny dokoteranao dia handanja ireo tranga mety hitranga sy ny tombotsoan'ny beta blocker. Misy ambaratonga isan-karazany ny risika amin'ireo blockers beta samihafa. Raha efa mandray beta blocker ianao ary fantaro fa bevohoka ianao dia manatona ny mpitsabo anao.
Aza mijanona mihinana beta blocker raha tsy manatona ny dokotera anao raha mila torohevitra ara-pitsaboana. Ny fijanonana ny blocker beta, indrindra ny tampoka dia azo ampifandraisina amin'ny fahasarotana.
Afaka mandray beta blockers ve ianao rehefa bevohoka na minono?
Manontania mpitsabo anao raha mila torohevitra momba ny fitsaboana ianao beta blockers raha bevohoka na minono . Ny dokotera dia tsy hanome fanafody beta blocker raha toa ka mihoatra ny loza mitatao ny tombony.
Voafehy ve ny beta blockers?
Tsia, ny beta blockers dia tsy zavatra voafehy.
Ny voka-dratsin'ny blockers beta mahazatra
Ny voka-dratsin'ny beta blockers dia ny:
Mangatsiaka tanana sy tongotra
Vava, hoditra ary maso maina
Fitempon'ny fo (bradycardia)
Tsy fahita firy ny fanehoan-kevitra momba ny allergika amin'ny beta blockers. Raha mahatsapa tantely ianao, sahirana miaina, na mivonto ny molotra, ny lela, na ny tarehy, dia mitadiava fitsaboana maika.
Ny voka-dratsy hafa dia mety hitranga. Miresaha amin'ny dokotera momba ny vokatra hafa antenaina sy ny fomba hiatrehana azy ireo.
Ohatrinona ny vidin'ny beta blockers?
Ny Beta blockers dia manodidina ny $ 20 ka hatramin'ny $ 265. Ny fisafidianana blocker beta generic dia hitahiry vola be mihoatra ny solon'ny marika (ary azo antoka fa voaro amin'ny fiantohana). Raha te-hihary vola amin'ny beta blocker ianao dia ampiasao maimaim-poana Coupon SingleCare hitahiry vola (hatramin'ny 80%) amin'ny prescription sy refill-nao.
Suboxone vs Methadone: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Ny fomba nitetezako ny diagnostika voan'ny kanseran'ny vozon-tranonjaza nandritra ny fitondrana vohoka
lisitry ny antibiotika izay miteraka c diff
ohatrinona ny advil azoko alaina amin'ny fanaintainana miverina
ny fomba fanariana holatra amin'ny tongotrao
ny fomba fanasitranana aretina azo avy amin'ny lalan-dra
Azonao atao ve ny misambotra pnemonia mandeha amin'ny olona iray
ny fomba hampidina tosidra amin'ny 24 ora